အမှားမှား အယွင်းယွင်း အလွဲလွဲ အချော်ချော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အမှားမှား အယွင်းယွင်း အလွဲလွဲ အချော်ချော်
အမှားမှား အယွင်းယွင်း အလွဲလွဲ အချော်ချော်
Posted by စိန်ကြက်ဆင် on Jul 18, 2013 in Aha! Jokes, Satire, My Dear Diary | 17 comments
မြန်မာလို တထောင့်သုံးရာနဲ့ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှန်း သေချာမသိ … မှတ်မိတာ နောင် ဆယ်နှစ်ကျော်မှ
အဖေက ကရင်လူမျိုး တလိုင်းပေါ့ … အသားခပ်လတ်လတ် ညိုတောင်မညိုရှာပါဘူး
အမေက ဧရာဝတီတိုင်း ၀ါးခယ်မသူ ဖြူတာမှ ဖွေးရော … ရန်ကင်းမှာ တွေ့ပီး လူငယ်တို့ သဘာဝ ဒွန့်လိုက်တော့ အစ်မတော် ၂ယောက် တရုတ်ပြည်က ကြွာလာလို့ … ကြုံတယ်ထင်ပါတယ် ….. ဖြူဖြူဖွေးဖွေးပေါ့ ။
ဘယ်နဲ့ဗျာ ကျုပ်ကျမှ …. အဲ့တုန်းက နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားလဲ ခေတ်မစားသေးပါဘူး … အမီတာဘရ်ဂျန်းလဲ ခေတ်မထသေး … ကျုပ်ကျမှ ဂဲမွေးတဲ့ ကာတော်လိပ်က ဆင်းဆင်းချင်း နာ့စ်တွေကြား ဦးအောင်ဇေယျ လက်ရုန်း မီးတောက်တာတော့ ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ် …
၈၈မှာ ဥက္ကလာတခွင် ပြဲပြဲစင် မြောင်းထဲမှာ ၀ဲဘလက်ဗျစ်နဲ့ ၁၁နှစ်သားကျုပ် ဒေါင်းငါးတွေ ဖမ်းနေချိန် ဂျင်ကလိတွေဂျီး တွေ့တွေ့နေတယ် …။ အဲ့မှာ စလွဲတာပဲ ၅ရက်ကွက်သားကျုပ် ဦးလာဘရဲ့ အချည်ဆိုတာ ၀ါးခယ်မကပို့တဲ့ ခါးတက်ချဉ်လောက် ကောင်းရိုးလားပေါ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဟုတ်မှတ်လို့ ပါရမီလမ်းပေါ်ထွက် ငါဟဲ့ ၅ရပ်ကွက်သားပေါ့ … လက်ထဲမှာ ဖန်ပုလင်းတဘက် ဂျင်ဂလိ တဘက် ကိုင်ထားချိန် ဇတ်ကနဲ ဂုတ်ကဆွဲလို့ ကားယားယား ပါသွားလေရဲ့ ။ အဲ့မှာ နိူင်ငံရေးဆိုတာ စသိတာ …………… နိူင်ငံရေးအကြောင်းပြောရရင် နိူင်ငံရေးနဲ့ မိဘကျေးဇူး ဆပ်ဖူးတယ် အဲ့အရေးအခင်းကာလ ၄၀ိုင်းထိပ်က သမဆိုင်ကို ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူတွေ ၀ိုင်းဝန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ကျုပ်လည်း ဆန်တဆွဲနဲ့ ဆပ်ပြာ ၃ပိုင်း အိမ်ကိုပါလာတယ် …. အဖေက မြ၀တီဘောပင်နဲ့ ဆောင့်ထိုးတာ ခုထက်ထိ ပေါင်မှာ ဒဏ်ရာရှိသေးတယ်။ စာရိတ္တပျက်လို့တဲ့ ….
ဒါနဲ့ စာအတော်အတန် ဖတ်တတ်တဲ့ အချိန် အာဇာနည်နေ့ ရောက်တိုင်း သူများတွေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို တမ်းတနေချိန် ကျုပ်ကတော့ ဂလုန်ဦးစောကို အံ့ကျော်လောက်မှ သတိမထားဖြစ် … ဦးနေ၀င်း( ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း) ကို တိုးတိုး ဆဲမိလေရဲ့ အကျယ်ကြီး မဆဲရဲဘူး ကျုပ်အဖေက ဦးစောနေ၀င်း …
ဆယ်တန်းတော့ အောင်တယ် ခင်ဗျားတို့ ပြောတဲ့ စိန်ပန်းပြာတွေ ဂျပ်ဆင်တွေ ဘာမှမသိ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ ဝေလာဝေး
စစ်တပ်ထဲ ရောက် ၁၃နှစ်
(နေဦး ဖင်မှာ RPG မှန်ထားသေးတယ် … မယုံရင် လှန်ပြလို့ရတယ်)
နိူင်ငံရေးလုပ် အဆောင် ၁၃မှာ ၂နှစ်
သကြားလုံးရောင်း မော်လမြိုင်မှာ ၁နှစ်
စင်္ကာပူရောက် ငါးချပီး သဘောင်္ကျင်းတကာ ငုတ်တိုင်စိုက် အိပ်ငိုက်
၃၆နှစ်ဆိုတဲ့ ကာလကို မှတ်မိသလောက် ချရေးရင် ခင်ဗျားတို့ ၃၆ရက်နဲ့ ဖတ်မကုန်ဘူး …. ကျုပ်လဲ မရေးနိူင်ဘူး ….။
ကျုပ်ရေးသမျှ လူ့ဘ၀ မှတ်တိုင် ကျုပ်ရိုးသားတယ်လို့တော့ မဆိုလိုဘူး ….
ဟော့ … ဒီဆိုဒ်မှာ ကျုပ်ထက် ရှင်းတဲ့ သူတောင် ကျုပ်လောက်မရှင်းဘူး
မြွေမြွေခြင်း ခြေမြင်တယ် …
သိပ်လဲ မရယ်ကျနဲ့အုံး …. အူတက်သွားမှာ စိုးလို့ …
ကျုပ်မှာ ပြဿနာတခုတော့ ရှိတယ် .. အတည်ရေးရင် လွဲတယ်
အလွဲရေးရင် … အဟုတ်မှတ်ကြတယ် …
လူတွေ အပြစ်မဟုတ် …. ကျုပ်အပြစ်
ကျုပ်တို့က ပညာမတတ်ခဲ့တော့ အဲ့လိုရှင်းရှင်းဘဲ ပြောတတ်တယ် …
အဲတော့ … ကျုပ်သက်လုံ သိပ်မကောင်းဘူး …
သြော် နေဦး အောက်မှာ ကျုပ် အလှဆုံးပုံ .. တင်ပေးထားတယ်
ဆိုတော့ ….. ပညာမတတ်တော့ အရပ်ထဲ အော်ဆဲသလိုပေါ့
အင်းဂလိပ်လိုလဲ တလုံးမှ မတတ်ဘူး ….
အတည် ပြောရင်လဲ လက်မခံချင်ဘူး ..
ဒီမိုးက ရပ်တိုင် ဈေးရှင်တို့ …
ဘာဘာညာညာ … ကြည့်ကျက်ပြောကျဗျာ …
ဆက်ဒန်ဟူစိန်၊ ကဒါဖီနဲ့ အိုစမာဘင်လာဒင်တောင် သေခါနီး ဆလမ်မလေးကွမ်းခံရတဲ့သူ
ကျုပ်လဲ ကြိုစားနေတယ် …
လာမဲ့ ၂၀၁၇မှာ ဟဲ့ရွာထဲက တယောက်မှတော့ ကျုပ်မမြင် ….. ကျုပ်ကလွဲလို့ …
နည်းနည်းလျော့ပါ ဦးဦး ကိုကို ဒေါ်ဒေါ် မမတို့ …
ညှင်း … ညှင်း …. ညှင်း
စတိုင်းယား …. ဒါပေမဲ့ … အတည်
၂၁ရက်နေ့ အရှက်မရှိ ဘူဖေးသွားစားဦးမှာ ….
ဒချိ ဒချိ ( ခွက်ဒစ်တူ ကနားစီး ဂီစိန်မ )
မဂျီး ပြန်လာမယ်။ အရင်နေရာ လာဦးတာ။
လူတိုင်းက ကိုယ့်ဘဝ အကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ချည်းပဲ၊။
တစ်ယောက်တည်း လွဲနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ စိတ်မှာမှတ်။
လူရင်း (လို့ ယူဆ) တာမို့ ပြောပြတာ။ မကြိုက်ရင် ဆောဒီးးးး
ခု ခင်ညားရဲ့ ဘဝ တစ်စိတ် လောက် ကို အကြမ်းဖျင်းသိရတော့ ပိုနားလည်သွားသလိုလို ဖြစ်သွားပြီ။
ကျုပ်က လူတစ်ယောက်ကို (မုန်းချင်၊ အမြင်ကတ်ချင်ရင်တောင်) သူ့ ဘဝ ကြောင်းကို ကြည့်ပြီး နားလည်ဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိတာပဲ။
ဘာလို့ဆို အမုန်းတရား ကို ကိုယ့်ရင်ထဲ အကြောင်းမဲ့ မမွေးချင်လို့။
သူငယ်ချင်း/မိတ်ဆွေဆိုရင် ပိုသိချင်တတ်ပါတယ်။ ပိုနားလည်ချင်လို့ပါ။
တော်ရောပေါ့ ဘဝမှာ ရန်သူ စစ်စစ် တစ်ယောက်ရှိရင်။
ကျုပ်မှာ ရန်သူစစ်စစ် ၃ ယောက်ရှိတော့ ဒီ ဘဝ အတွက် မောသန် အီနပ်(ဖ)။
အများကြီးပြောပြီးမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှားယွင်းလွဲချော်နေတယ်လို့ ခံစားရလို့။
သူပုန်ထမယ်ဆို ကြိုပြော၊ ပြေးမို့။
ဟရေး… စာဖတ်လာတာ အောက်ရောက်မှ လန့်လိုက်တာ… ကလူ ကလူ
၃၆တဲ့လား… ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်၊ သိပ်မစဉ်းစားနဲ့ကိုယ့်ဆြာ…
ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေး ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်၊ သူတပါးကို အရောင်မဆိုးရင်ပြီးတာပဲ…
ကွန်ဖြူးရှပ်တော့ မဖြစ်ချင်ဘူး၊ ငါးကွန်းရှပ်ကို ဟင်းချက်စားချင်နေတာဗျ… ဟီး ဟီး
ယွဲစီ ပုံမြင်ရတာ အံချင်စရာတော့..(အင်း..အမှန်ပြော စိတ်ဆိုးအုံးမယ်ထင်ရဲ့) ဟီး
နိူင်ငံရေးနဲ့ မိဘကျေးဇူး ဆပ်ဖူးတယ် ဆိုလို့ ဂုန်ယူဘာဒယ်
၂၁ရက်နေ့ အရှက်မရှိ ဘူဖေးသွားစားဦးမှာ ဆိုရင်တော့
အိမ်ကစောစောထွက်ခဲ့..နင်က မူးတူးတူးနဲ့ မျက်စိလယ်တတ်လို့
ဟိုက်​ !!!!!! 36
ဒါနဲ့ …ကျုပ်​က နှစ်​ဆယ်​​ကျော်​လို့ထင်​ထားတာ
အများပြောကြသလို ဖျားစူး ၃ခြောက် ပါလား။
၂၀၁၇ တွေ၊ ၂၀၂၀ တွေနဲ့ လာပြောမနေနဲ့။
ငါးဆယ်ကျော်ရင် လိုင်းပြောင်းတော့မှာ (ရှင်နေနိုင်သေး ဆိုရင်ပေါ့)။
မရှင်းရင် ရှင်း အောင် ရွာထဲက အင်မတန်ရှင်းတယ် လို့ ကြော်ညာ နေသူ ကို သွားမေး။
ရီဝေဝေ မျက်လုံးလေး တွေက လှသဟေ့။
အိုက်ဒါကျောင့် အူးလေးလမ်းလျှောက်ရင် လိမ်ဖယ် လိမ်ဖယ် ဖစ်နေဒါကိုး..ေိေိ
ညီး ၃၆ က နာ့ကို မမဂျီးလို့ အသဲနာအောင် မခေါ်နဲ့တော့အေ..
အစ က အဟုတ်မှတ်လို့ ဘာမှ မပြောတာ။
ဒါပဲ ကိုဂျီး ရဲစည်
e tone says:
36ဆိုတာလျော့ပြောထားတာချင့် … တကယ်တော့ 38ဆိုလား … မူးမူးနဲ့ပြောတုန်းက ကြားထားတာ …
လူကို အပြင်မှာ တခါပဲတွေ့ ဘူးသေးတယ်
ဆော်အရမ်းကြည်လို့ တမင် ရင့်အောင်လုပ်ထားတာလား
၃ခြောက် မှာ ခြောက်၃ ကျ/မကျ စမ်းစစ်နေတာလား ????
Happy Birthday လား ????
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့မှ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ နဲ့ လိုအပ်သော မြတ်သောဆုများ ရစေသောဝ်။
မဟုတ်လဲ ဟုတ်တဲ့ နေ့အထိ သိမ်းထားလိုက်။
ကိုငှက် ရဲ့အမှားအယွင်းကပွဲ ဆိုတဲ့ သီချင်းကို နားထဲမှာ ကြားလာမိသလိုပဲ
၃၆နှစ်ဆိုတော့ ဆယ်နှစ်ကျော်ကြီးလို့ ခေါ်လိုက်မယ် ဦးလေးရဲစည်…
ဒီအရွယ်ကြီးထိ မိဘ ဒုက္ခပေးတုန်းကိုး .. ကျော်ကတော့ အဲ့လို မဖြစ်မှာ သေချာသည်တမုံ့ ..ငိငိ..ဒချိ ..ဒချိ